Dai 6, 2022 Demi Banks, Moroko
Uri kutsvaga mabhangi akanakisa muMorocco? Chikamu chebhanga reMorocco chinotongwa nemabhanga makuru matatu emuno: Attijariwafa Bank, Credit Populaire du Maroc, uye Banque Marocaine du Commerce Exterieur. Morocco inyika yekuchamhembe kweAfrica inoganhurana neAtlantic
Mabhangi muCape Verde
Dai 5, 2022 Demi Banks, Kepu Vhedhi
Cape Verde, inozivikanwawo seCabo Verde, inyika yezvitsuwa uye nyika yezvitsuwa iri pakati peAtlantic Ocean, ine zvitsuwa gumi zvemakomo ane nzvimbo yakazara ye4,033 square kilometers. Vanhu veCape Verde vanhu vekuWest Africa.
Ndeipi mutengo wekugara muNigeria?
Dai 5, 2022 Shubham Sharma mari, Naijeriya
Mutengo wekurarama haudhuri kana uchienzaniswa nedzimwe nyika. Ichiri kudhura kana iwe uchida kurarama pamuhoro weNigerian. Uye vanhu vazhinji, inopfuura hafu yevagari vemo, muNigeria vanorarama nekurima pasina
Mabhangi akanakisa muDemocratic Republic of Congo
Dai 5, 2022 Shubham Sharma Banks, DR Congo
Mabhanga emuDemocratic Republic of Congo (DRC) akanaka. DRC ine Central Bank yeCongo (Banque Centrale du Congo, BCC) sebhanga guru reDRC. BCC inobata kutenderera kwemari uye inochengetedza iyo